【Qalabka Gawaarida】 Noocyada nalalka
Nalalka gawaaridatixraac laambadaha gawaarida. Waa aalad loogu talagalay gawaarida inay iftiimiyaan wadada habeenkii, iyo sidoo kale qalab loogu talagalay kicinta calaamadaha gawaarida kala duwan.
Nalalka gawaarida guud ahaan waxay u qaybsan yihiin laydhadhka hore ee guriga, laydhadhka dambe, calaamadaha leexashada, iwm.
Nalka hore ee iskudhafka hore ee baabuurka wuxuu saaran yahay xagga hore ee gaariga, badanaa wuxuu ciyaaraa doorka iftiiminta iyo ishaarooyinka.
Iftiinka ay iftiimiyaan nalka hore ee baabuurka ayaa iftiimin kara xaaladaha waddooyinka hor yaalla jirka gaariga, si darawalku si nabad ah ugu kaxeeyo mugdiga. Sida laga soo xigtay isha iftiinka, nalka hore ee la isku daray waxaa loo qaybin karaa laambadaha halogen iyo laambadaha xenon, kuwaas oo loo qaybin karo hadba sida ay u shaqeeyaan (1) Nalalka iftiinka hooseeya, (2) laydhadhka dhaadheer ee sare, (3) calaamadaha hore ee leexashada, (4) ) Nalalka booska hore (oo sidoo kale loo yaqaan laydhadh ballaadhan, nalalka booska oo tilmaamaya jiritaanka baabuurta), nalalka ceeryaanta hore. Nalalka ceeryaanta ayaan looga baahnayn qawaaniinta qaranka, moodellada oo dhami waa kuwo qalabaysan.
Isku darka dambe
Iftiinka dambe ee isku darka iftiinka gadaal waa gaariga gadaashiisa, badanaa wuxuu ciyaaraa doorka iftiiminta iyo ishaarada. Nalalka gadaal guud ahaan waxay ka kooban yihiin (3) nalalka booska gadaal, (5) nalalka gadaal u roga, (1) nalalka biriiga, (2) nalalka ceeryaanta gadaal, (4) nalalka isteerinka gadaal, iyo milicsiga gadaal.
Nalalka signalada leexinta ayaa loo isticmaalaa in lagu muujiyo dadka kale ee wadada isticmaala si ay ugu leexdaan bidix ama midig. Shuruudaha sharciyeynta waa amber.
Nalalka taarikada baabuurta waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu iftiimiyo taarikada, si dadku ay u kala soocaan taarikada baabuurka gudcurka.
Wax soo saarkayaga waxaa ka mid ah laambadaha baabuurta, bambooyinleyda, dabka, grilles, muraayadaha, taageerayaasha korontada, haamaha biyaha iyo noocyada kale ee gawaarida gawaarida. Dhammaan alaabooyinka waa lagu beddeli karaa alaabooyinka soo saarayaasha qalabka asalka ah.
Qaybaha gawaarida gawaarida ee jumlada, alaabadayada la soo saaray ee loogu talagalay gawaarida Mareykanka, Yurub, Japan iyo Kuuriya ayaa si aad ah ugu iibinaya Afrika, Yurub, Bariga Dhexe, Koonfurta Ameerika, iyo Koonfur-bari Aasiya.
Baakadaha adag ayaa ka ilaalin kara badeecadaha waxyeello kasta oo suurtagal ah inta lagu jiro safarka. Had iyo jeerna si taxaddar leh ayaan u hubinnaa ka hor shixnad kasta si loo yareeyo walaaca macaamiisha.
Waxaan si buuxda u muujineynaa wacyiga dhismaha-dhismeed waxaanna bixinnaa adeeg hal-joogsi ah oo ay ku jiraan wax soo saarka, saadka, iyo nadiifinta caadooyinka macaamiisheenna. Waxaan lashaqeyneynaa Sinotrans Limited oo ah iskudhafka ugu weyn ee iskudhafka saadka ee Shiinaha. Iyada oo ku saleysan fikrad ganacsi oo guuleysata, waxaan la shaqeynaa daacadnimo waxaanan dadaal u galnaa shaqo si aan uga caawinno macaamiisheenna inay si wanaagsan u gutaan howlaha.
Waqtiga boostada: Mar-23-2021